Aina vao ho an’ny soradihy: mamorona ny feon-kira hilalaovany ny Gasy Dihy | NewsMada
Aina vao ho an’ny soradihy: mamorona ny feon-kira hilalaovany ny Gasy Dihy
Seha-kanto iray anisan’ny miroborobo ny dihy eto Madagasikara. Samy miezaka mitrandraka sy mamoaka ny talentany ny tarika tsirairay. Anisan’ny tarika vao haingana, kanefa efa manomboka misongadina ny Gasy Dihy. Mampiavaka azy ny fananan’ny tarika feon-kira manokana izay noforonin’i J.L, lehiben’ny tarika rahateo.
“Hataonay avokoa ny dihy malagasy rehetra ary ezahinay tsy afangaro mihitsy. Mba hialana amin’ny mety hoe fitoviana amin’ny trandraka nataon’ny namana hafa, namorona feon-kira koa izahay fa tsy mitaingina hirana mpanakanto hafa”, hoy ny fanazavan’i J.L.
Mpanakanto tanora 10 mianadahy, dimy lahy sy dimy vavy, no mandrafitra ny Gasy Dihy. Nanomboka tamin’ny fanafanana fetim-piangonana sy lanonam-pianakaviana izy ireo. Miitatra tsikelikely izany, ka fantatra fa anisan’ny hanafana ny lanonana mandritra ny Taombaovao malagasy, ny 6 avrily izao ihany koa izy ireo.
“Manana soradihy mirindra 5 izahay, tao anatin’izay volana vitsivitsy nitsanganan’ny tarika izay. Efa misy maromaro eo am-piketrehana ihany koa ao. Tsy manakana ny fiaraha-miasanay amin’ny mpanakanto hafa, mila mpandihy akory izany, na eny an-tsehatra na anaty rakitsary”, hoy hatrany ny filazan’ny lehiben’ny tarika Gasy Dihy.